EW! | Buzz News
MRTV4မင်းသမီးလေးတွေထဲမှာ ဘယ်သူ့ ကိုအချစ်ဆုံးလဲ Vote ခဲ့ကြပါနော်
အောက်မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့မင်းသမီးကို Vote ပေးခဲ့နော်
27 Jun, 06:07 AM
ကာရိုက်တာ​တစ်​ခုအတွက်​ တန်​ဖိုးထားရတဲ့ ဆံပင်​အရှည်​​လေးကို ညှပ်​ပစ်​ခဲ့ရတဲ့ ပိုးကြာဖြူခင်​
13 Jul, 03:43 PM
အောင်မင်းခန့် နဲ့ ဘယ်သူအလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်မလဲ??? Vote ခဲ့နော်
မင်းသားအောင်မင်းခန့် နဲ့ ဘယ်သူအလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်မလဲ vote ပေးခဲ့နော်
25 Jun, 03:23 AM
အရက်မူးလွန်ကာ သော့တွဲကို အမြည်းမှတ်ပြီး ဘီယာနဲ့မျှောချလိုက်မိသူ | Lwin Pyin News
ရေချိန်ကျော်ပြီး အမူးလွန် သွားပြီဆိုရင်တော့ ပြသနာ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့ တတ်စမြဲပါပဲ။
24 Jun, 02:44 PM
မိခင်​အတွက်​ရည်​စူးကာ ကုသိုလ်​​ကောင်းမှုပြုလုပ်​ခဲ့တဲ့ ခြူး​လေး
4 Jul, 02:38 AM
14 Jul, 10:30 AM
သင့်ချစ်သူကို မပြောသင့်တဲ့ စကား(၅) ခွန်း
သင့်ချစ်သူက သင့်ကို တကယ်ချစ်ရဲ့လား။ အဖြေသိချင်ရင် အောက်ကမေးခွန်းလေးတွေဖြေကြည့်နော် ပုံမှာရေးထားတဲ့ မေးခွန်းလေးကို ဖတ်ပြီး အဖြေကိုရွေးလိုက်ရုံပါပဲ။ မေးခွန်း ၉ ခုပြီးသွားတာနဲ့ အဖြေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
25 Jun, 09:14 AM
အိမ်သာတက်တုန်းတောင် V call ခေါ်တာနော်
22 Jul, 03:16 AM
“မချစ်သင့် မချစ်ထိုက်သူကို ချစ်ရင် သေတတ်တယ်” ဆိုတဲ့စကားက ရင်ထဲထိတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါင်း - Nanmalgyi
6 Jul, 03:37 AM
ပုရိသတွေ စွဲမက်ဖွယ်အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လေး ခင်ရတနာလွှမ်းမိုး
21 Jul, 04:19 AM
အချို့က ချမ်းသာချင်ကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် ချမ်းသာမလာဘူး၊ တစ်ခါတလေ ၀င်ငွေက ကြမ်းသလောက် ဘာကြောင့် မချမ်းသာရတာလဲဆိုပြီး သိချင်နေကြတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ Shwemom ပရိသတ်ကြီးအတွက် ချမ်းသာချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ပါ အချက်(၇)ချက်ကို ရှောင်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။ (၁)...
7 Jul, 07:50 AM
တူမ​လေး တစ်ေ​​ယာက်​ ရလိုက်​လို့ ​ပျော်​မဆုံးဖြစ်​​နေတဲ့ ခြူး​လေး
12 Jul, 04:13 PM
မြန်မြန်ဆန်ဆန် အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်စေဖို့
အင်္ဂလိပ်စာ ကောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာကတော့ တကူတကပြောစရာ မလိုလောက်တော့ပါဘူးဗျာ။ အခုမှ အင်္ဂလိပ်စာကို စတင်လေ့လာမယ့်သူတွေရော လေ့လာနေတဲ့သူတွေရော ပိုထိရောက်ပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် တိုးတက်လာစေမယ့် နည်းလမ်း လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
24 Jun, 06:13 AM